MAWDUUC 5: SIDEE EY SIDAAN KU NOQOTEY? | Ung & Gravid
MAWDUUC 5: SIDEE EY SIDAAN KU NOQOTEY?
Nolasheena dhan waxaan gaarnaa go’aan. Ilbriqsi kasto. Go’aamada aan gaarno waa la badalikaraa. Lakiin go’aanka la joojinaaya ama la haysanaayo uurka, lamma badalikaro. Sidaa daraadeed eyeey ku addag tahay dad qaarkood. Laakin runtii dad badan ayaa gaara go’aanka anaga imaanin meel dheer. Maxaa go’aankeena keenaayo? Waxay noqonkartaa sida adiga wax u aragtid isbadal bulshada aad ku nooshahay ka imaanaayaan.
Bulshada waxey kaa rabaan
Markii noola dhalo waxaa nalaga sugaa si gooni ah in u dhaqano, iyo waxa nagala rabo. Taasi wax aad u adag ayeey na geeyney, weey nugu adakaankartaa in aan doorankarno sidaa rabno iyo waxaa iskaa u dooran kartid. Sidaa daraadeed ey u sii adkaan kartaa in aan gaarno go’aan shaqsi ah..
Iyadoo eheeyn joogto in aan doorano wax cad. Waxbadan ayaa dhacaayaan oo xaalada badaleeyso. Hoos waxaad ka arkeysaa lambar ka imaaday baaritaan ku saabsan galmoon qasabah iyo daroogo.
Baaritaan ku saabsan galmo qasab ah
Baaritaan oo ey sameeyeen Norstat hadana u sameeyeen Russens urrurkagudiga, ku dhawaadka kalabar gabdhaha u dhexeeyaan 15 iyo 20 sano waxey heleen khibrado aan fiicneyn oo ku saabsan galmoon.
Dhalanyarta waxey la kulmaan galmoon biime eh.
Dad badan ayaa la kulmaan in la qasbo in ey sameeyaan galmo marka ey joogaan xaflad gooni ah. 45 % gabdha ah iyo 21% wiilal ah ayaa la kulmeen in xaduudaada la soo dhaafo. 43% gabdha ah iyo 28% wiilal ah ayaa ka shalaayeen khibrad u yeeshteen galmad. Iskoolka, sms, banaanka iyo internetka waxaa waaye barxadooyinka xadgudubka ka dhacaan.
Daroogo iyo dareemaha raga iyo dumarka ka dhexeenkaro
84% dhalanyarta ah waxey la kulmeen wax aan fiicney marka dadka isticmaalaan qamri.
47% waxey dhahaayaan in ey la kulmeen ayaga oo jecleen in la siiyey digtooni ku saabsan galmood.
Wey fududaha in marmarsiimo ku gaarno markaad sarqaansantahey oo ogaano in meel fog tagnay.
Go’aanada aan gaarno
Hoos waxaa ka arkeysaa masawir ku tusaayo sida aad ku gaari laheeyd go’aanada uurka. Adiga inta mi’iska fiirin kartaa?
Kalabarka dhalanyarta waxey soo maraan in ey ku adagtahay xuduud in ey sameyaan.
Ma kula saxsanyihiin lambarda ku saabsan khibradaada?
Goormaad dareemey xuduudaada in la biimeeyo?
Mxaa dhib ka dhigaaya in xuduud la sameeya?